गोस्वारा हुलाक : सेवा परिवर्तनको आवश्यकता कि, राज्यका लागि बोझा ? – Mission Khabar
गोस्वारा हुलाक : सेवा परिवर्तनको आवश्यकता कि, राज्यका लागि बोझा ?
मिसन खबर २३ आश्विन २०७५, मंगलवार १५:२५
काठमाडौं– कुनै बेला संवाद आदान प्रदानको एक मात्र माध्यम मानिन्थ्यो हुलाक । चिठी बुझ्न होस् वा पठाउन्, हुलाकमा निक्कै लामो भीड लाग्थ्यो । तर सूचना प्रविधिले हातहातमा मोवाईल सेवा पुर्याएपछि हिजो नभै नहुने हुलाक बोझ बन्न थालेको छ ।
देशका कतिपय स्थानमा हुलाकै नासिएका छन्, भने भएका गोस्वारा हुलाक कार्यालय जाखिर खाने थलो मात्रै बनेका छन् । राज्यले अहिले पनि हुलाक सेवामा तीन अर्बको बजेट निकासा गरिरहेको छ । हुलाक विभाग अन्तरगत नीजामतीका सात हजार र अस्थायी १० हजार गरेर १७ हजार कर्मचारी पनि छन् । तर चिठि आदानप्रदान ठप्प भएको हुलाक आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्थामा छ । हुलाकमा सेवाग्राहीको भीड छैन तर कर्मचारी आफुहरुमाथि कामको बोझ बढेको बताइरहेका छन् ।
अन्य राष्ट्रले नविनतम प्रविधिलाई आत्मसात गरेर हुलाकको महत्व बढाउदैगर्दा हाम्रो गोस्वारा हुलाक भने पार्सल पठाउन र सरकारी चिठी पत्र पठाउनमै सिमित छ । सन् १९७६ मा विश्व हुलाक संघको सदस्यता लिएको नेपाल हुलाकलाई विश्वस्तरिय सुधार गर्न लाग्ने कि दिवस मात्रै मनाएर कर्मचारी पालिरहने ?